Feeryahanka Caanka ah Mohamed Ali oo isbitaalka laga saaray ~ RAYO TV BORAMA
Feeryahanka Caanka ah Mohamed Ali oo isbitaalka laga saaray
By rayo tv at 1:22 AM News No comments
(Rayotv 08.01.2015 ) Feeryahankii caanka ahaa Mohamed Ali ayaa labadii todobaad ee lasoo dhaafay ku jiray isbitaalka kadib markii uu soo ritay xanuun cusub, habeen hore ayaa laga fasaxay isbitaalka kadib markii xaaladiisa caafimaad ay soo hagaagtay.
Mohamed Ali oo si weyn caalamka looga yaqaan ayaa ah 72 sano jir, wuxuuna horey u qabay cudurka Parkinson oo laga helay sanadkii uu ka fariistay ciyaaraha ee 1981kii. Mohamed ayaan inta badan lagu arag goobaha ay dadka isku yimaadaan, waxaana lagu wadaa in 17ka bishan Janaayo uu u dabaal dego dhalashadiisa 73aad.
Tan iyo markii isbitaalka la dhigay labo todobaad kahor ayaa si weyn looga deyrinayey xaalada caafimaad ee Mohamed Ali, balse dhakhaatiirta ayaa sheegay inuu gebi ahaan kasoo kabtay infekshon uga dhacay dhanka kaadi heysta.
Mohamed Ali ayaa marka laga yimaado ciyaarihiisa lagu xasuustaa go’aanadii siyaasadeed ee uu qaatay sida, bedalida magaciisa markii uu diinta Islaamka qaatay, diidmadii uu uga horyimid inuu ka qeyb qaato dagaalkii Maraykanka ku qaaday Vietnam iyo waliba halgankii uu u galay xaquuqda dadka Madow ee Maraykanka ah.